Tidig intervention - Soomaali
Kom igång med kommunikation - Soomaali
Bilow inaad la xiriirto
Maxay muhiim u tahay in la bilaabo?
Carruurtu intaysan baran inay hadlaan, waxay adeegsadaan indho-indheyn, tilmaamno, sawaxan iyo wejiga si ay u muujiyaan waxa ay sameynayaan iyo waxa aysan rabin inay sameeyaan, waxay u maleeyaan inay wanaagsan yihiin, iyo waxay u maleynayaan inay yihiin madadaalo. Waxay sidoo kale si cad u tilmaami karaan waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyo waxa aysan jeclayn. Tan waxaa loo yaqaan ''isgaarsiin aan hadal ahayn'' ama ''isgaarsiin hore''. Wadahadalka hore waa shuruud u ah canugga sii wadida barashada ku hadalka iyo horumarinta xirfadaha kale ee muhiimka ah. Markuu cunuggu barto tilmaamidda, isaga / iyadu waxay baran karaan ereyo cusub iyadoo qof weyn uu ku yiraahdo magaca waxa uu canuggu farta ku fiiqayo. Canugga wuxuu kaloo tilmaami karaa inay wax khaldan yihiin marxaladda hore, taasoo u sahlaysa dadka waaweyn inay wax ka qabtaan jahwareerka cunugga. Sidaas darteed waa muhiim inaad ka caawiso ilmahaaga inuu bilaabo inuu la xiriiro xitaa kahor intuusan isagu / iyadu hadalka bilaabin.
Sideen u caawin karaa ilmahayga?
Dhammaan isgaarsiinta waxaa lagu bartaa dhexgalka dadka kale. Carruurta waxay ka baran karaan ereyo iyo dhaqdhaqaaqyo cusub fiidiyowga, laakiin waa inta lagu jiro muddooyinka dareenka la wadaago inay bartaan inay u isticmaalaan si ay ula xiriiraan. Feejignaanta la wadaago waxay ku lug leedahay cunugga oo si miyir leh diiradda u saaraya wax la jooga qof kale.
Haddii aad sameysid feejignaan la wadaago marka cunugaada uu ku ciyaarayo lulmidda, cunugaada wuxuu baran karaa inuu kaa codsado inaad isaga / iyada si dhaqso leh ugu riixdo adiga oo ku fiirinaya ama ku leh ''wax badan''. Ilmahaaga wuxuu kaloo baran karaa inuu kula wadaago farxadda markaad isfiirisaan oo aad isla qoslaan. Si looga caawiyo ilmahaaga inuu horumariyo xirfadaha wada xiriirka, waxaa lagama maarmaan ah inuu yeesho waqtiyo badan oo wada jir ah iyo isdhexgal. Waxaa jira xeelado dhowr ah oo aad u adeegsan karto inaad tan ku gaarto:
Xiriirka seddax geesoodka
Si loo gaaro dareenka la wadaago, waxaa muhiim ah in loo fududeeyo cunugga inuu ku soo fiiriyo adiga iyo waxa aad ku ciyaareyso ama aad daawaneyso.
Si tan loo sameeyo, ilmahaaga dhig, wax kasta oo aad diiradda saareyso iyo naftaada saddexagalka. Tani waxay abuureysaa waxa loo yaqaan 'saddex-geesoodka isgaarsiinta' waxayna suurtagal ka dhigeysaa in lagu gaaro dareenka la wadaago.
Sax oo ka jawaab xiriirka ilmaha
Inta lagu jiro waqtiyada dareenka la wadaago, qaangaarka waa inuu la qabsadaa oo uu ka jawaabaa xiriirka ilmaha. Tan waxaa lagu magacaabaa iyadoo la adeegsanayo qaab isgaarsiineed oo jawaab celin ah.
Eeg oo dhagayso waxa ilmahaagu samaynayo iyo waxa uu sheegayo, iyo waxa isaga / iyadu ay u muuqdaan inay xiiseynayaan - oo faallo ka bixi.
Sug oo filo inuu ilmahaagu ka jawaabo. Badanaa waxaad sugi doontaa xoogaa yar inta ay carruurta yar yar ka jawaabaan. Cunugaaga waxaa laga yaabaa inuu ku jawaabo isagoo tilmaamaya, sameeya shanqar, kor u fiirinaya, tilmaam sameynaya ama isku dayaya inuu ereyo dhaho.
Tarjumaan oo xaqiiji wax kasta oo ilmahaagu u sameeyo wada hadal ahaan. Waad ku xaqiijin kartaa adoo ku dayanaya ilmahaaga ama aad ku sii ballaadhinaysa waxa uu isagu / iyadu sheegay ama sameeyey. Tusaale ahaan, haddii aad ku ciyaareyso lulmoodyada oo cunugaada uu dhahayo 'wax badan', xaqiiji oo ballaadhi waxa uu isagu / iyadu ku yidhi adoo leh 'haa, waxaad dooneysaa inaad si dhakhso leh u socoto!' Ka dibna riixaya lulida waxyar ka dhakhso badan.
Marka xiriirku si habsami leh u socdo, dadka waaweyn waxay u sameeyaan si miyir la'aan ah. Haddii ilmuhu ka gaabiyo barashada isgaarsiinta, dadka waaweyn waxay badiyaa ku jawaabaan iyagoo la yareeya cunugga iyo in yar. Haddii ay arintu sidan tahay, waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal miyir qab ah si aad u isticmaasho qaabka isgaarsiinta jawaabta leh si aad uga caawiso cunugaada inuu bilaabo isgaarsiinta.
Waxyaabaha ku saleysan sawirka
Caruurta yar yar way ku adagtahay inay ka hadlaan waxyaabo aan halkan iyo hadda ka dhicin. Ma yaqaanaan ereyo ku filan oo ay kaga qayb qaataan wada hadalka, wayna ku adkaan kartaa inay fahmaan waxa aan ka hadlayno. Adiga oo adeegsanaya sawirro, waxaad ku guuleysan kartaa xilliyada dareenka la wadaago ee ku saabsan waxyaabaha aan dhab ahaan ka dhicin halkan iyo hadda
Habka ugu fudud ee lagu bilaabi karo isticmaalka waxyaabaha ku saleysan sawirka waa inaad ku ururiso sawirro iyo fiidiyowyo taleefankaaga casriga ah ama iPad-ka. Ka dib waad wada eegi kartaan sawirada si aad uga wada hadashaan waxaad qabateen. Carruurta badankood waxay jecel yihiin inay naftooda fiiriyaan iyo waxyaabaha ay gartaan. Tani waxay ilmaha ku dhiirrigelisaa inuu xiriir sameeyo.
Ka hadal goobta ciyaarta
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa sawirro si aad uga hadasho waxyaabaha dhici doona. Markaad tusto ilmahaaga sawirrada iyo ka hadalka waxa dhici doona, waxaad ka caawinaysaa ilmahaaga inuu u diyaar garoobo - oo markuu isagu / iyadu ka war hayaan waxa dhici doona, waxay u badan tahay inay guuleystaan. Waxa kale oo ay noqon kartaa fikrad fiican in la daabaco sawirro qaarkood. Tusaale ahaan, haddii aad sudho sawirrada dadka muhiimka ah guriga, ilmahaagu wuxuu u isticmaali karaa sawirrada si uu su'aalo u weydiiyo ama uga hadlo qofka.
Calaamadaha sida ACC
Carruurtu waxay si dabiici ah u bartaan inay la xiriiraan iyagoo adeegsanaya astaamo kahor intaysan baran hadalka. Carruurta yar yar waxay u fududaanaysaa inay fahmaan waxa aan dhahayno haddii aan isticmaalno dhaqdhaqaaqyo badan iyo muuqaalka wajiga. Hal dariiqo oo lagu taageerayo horumarka isgaarsiinta ilmahaaga ayaa ah inaad isticmaasho calaamadaha luuqadda dhagoolaha isla waqtiga aad la hadlayso isaga / iyada. Tan waxaa loo yaqaan 'Calaamadaha lagu beddelayo ama is-gaarsiinta dhammaystirka ah', ama 'SACC' marka la soo gaabiyo.
Marka qof weyni isticmaalo calaamadaha, way u fududahay cunuggu inuu diirada saaro qofka weyn. Calaamadaha waxay kaloo ilmaha ka caawiyaan inuu fahmo macnaha erayada kala duwan. Marka dadka waaweyni isticmaalaan calaamadaha, carruurtu waxay bartaan astaamo muhiim ah naftooda, oo markaa ay isticmaali karaan illaa ay ka bartaan inay dhahaan ereyada la xiriira.
Halkan waxaa ku yaal koorso internetka ah haddii aad jeclaan lahayd inaad barato isticmaalka calaamadaha beddel ahaan iyo is-gaarsiin dhammaystiran
Abuur munaasabado loogu talagalay isgaarsiin
Si aad uga caawiso ilmahaaga inuu horumariyo xirfadaha isgaarsiinta, waxaad u baahan tahay inaad abuurto munaasabado fara badan oo isdhexgal ah iyo dareenka la wadaago maalin kasta.
Halkan waxaa ah aruurinta tilmaamaheena ugu waxtarka badan ee abuuraya munaasabado badan oo lagula xiriiro nolol maalmeedkaaga.
Ka hadal oo ku sharax ereyo waxa adiga iyo ilmahaagu ku qabtaan nolol maalmeedkiina - tusaale ahaan, markaad beddelaysaan xafaayadda, gacmaha iska maydh ama ka soo lugeeya xanaanada.
Wada aqriya buugaagta maalin kasta. Halkan guji si aad u aqriso sida loo bilaabo wada akhriska. Xiriirinta bogga akhriska buugga.
Kala hadal ilmahaaga wixii dhacay ama dhici doona. Adeegso sawirro ama fiidiyow intaad la sheekaysaneysid si ay ugu fududaato ilmahaaga inuu ku biiro wadahadalka.
La ciyaar ilmahaaga Dooro nashaadaad iyo ciyaaro uu ilmahaagu ka helo. U qorshee ciyaaraha si labadiinaba adiga iyo cunuguba aad u yeelataan doorar cad, iyo in cunugu u baahan yahay inuu kula soo xiriiro inta ciyaarta socoto.
Kaqeyb geli ilmahaaga hawl maalmeedkaaga. Haddii aad u ogolaato ilmahaaga inuu kaa caawiyo miiska jiifka, iska nadiifi alaabada uu ku ciyaaro, faaruqinta makiinada weelka lagu dhaqo, ama ku shubto mashiinka dharka lagu dhaqo, kuwan oo dhami waa munaasabado aad u fiican oo lagu barto isgaarsiinta.
Laqabsii xaaladaha si ilmahaagu ugu baahdo inuu inbadan kulahadlo. Haddii aad ku quudiso cunugaaga miro qaybo yar, tani waxay isaga / iyada siineysaa fursad uu ku weydiisto 'inbadan' marar badan. Waxa kale oo aad dhigan kartaa alaabta ilmahaaga si muuqata oo loo arki karo sariir sidaa darteed ilmahaagu waa inuu ku celceliyaa inuu ku weydiisto inaad hoos u dhigto markuu isagu / iyadu doonayo inuu la ciyaaro.
Soo koobid daabacan ee bogga
Ka caawi cunugaada inuu bilaabo isgaarsiinta (pdf).﻿
Bilaabida wada akhriska﻿
Maareynta hawlaha maalinlaha ah﻿
Waa maxay faragelinta hore?﻿